Nhau - CIAAR 2017 【Exhibition Live】
MunaNovember 2017, wechi15 Shanghai International Automotive Mhepo Inodzora uye Refrigeration Technology Exhibition (CIAAR 2017) yakaitirwa muShanghai Everbright Convention uye Exhibition Center zvinobudirira. Sekuungana kwegore negore kwemaindasitiri emhepo anodziisa mhepo, chero chiyero chechiratidziro kana huwandu hwevatengi, ivo vawedzera nhoroondo. Chiratidziro chine huwandu hwemazana mana nemakumi mana nematanhatu emabhizimusi anotungamira indasitiri uye makambani emumiriri nekune dzimwe nyika mumusha nekune dzimwe nyika mumazuva matatu. Panguva imwecheteyo, chiratidziro chinokwezva United States, Canada, Australia, Russia, South Korea, Egypt ne101919 vashanyi vehunyanzvi vanobva kunyika makumi mana nematunhu vakauya kuzoshanya nekutenga. Zviratidziro zvinosanganisira zvitatu zvikuru nzvimbo dzechigadzirwa: zvigadzirwa zvemumhepo-kutonhodza zvigadzirwa, nharembozha yefiriji uye zvigadzirwa zvekufambisa zvefiriji.
Kubva 2010 kusvika 2017, kambani yedu yakabatanidzwa mu7 inoteedzana Shanghai kuratidzira, isu takaona kukurumidza kukura kwemotokari mweya-kutonhodza. Mota zvifambiso zvakakosha kuhupenyu hwevanhu. Nekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, vanhu vazhinji vanotanga kutenga mota. Zvisinei, kushandiswa kukuru kwemotokari kwaunza nhevedzano yezvinetso senge kushandiswa kwesimba, kushomeka kwezviwanikwa, uye kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Aya matambudziko akakurudzira makambani makuru emota kugadzira mhando dzakasiyana dzemotokari nyowani isina tsvina. Kuti tigutse zvido zvacho, kambani yedu yakagadzira magetsi emagetsi emagetsi emagetsi matsva. Ipapo magetsi emagetsi emagetsi emagetsi anoshandiswa mumotokari dzemagetsi dzakaderera-kumhanya uye kusangana nezvinodiwa nevashandisi vakasiyana. Izvo zvigadzirwa zvine kuvimbika kwakanyanya. , Kubudirira kwepamusoro, kugona kukuru kwekutonhora, kushanda kwakadzikama, ruzha rwakaderera, nezvimwewo, izvo zvinogona kuchengetedza simba neinenge 20% zvichienzaniswa nezvigadzirwa zvakafanana.
Pakati pemazuva matatu, kune vazhinji varatidziro yekutishanyira. Iyo rotary vane patent haina kungokwezva kutarisisa kwevakawanda vekugadzira machira, asiwo vashanyi vazhinji vekunze vaifarira.Vazhinji vatengi vanofarira vakakumbira kudzidza zvakawanda nezve ruzivo rwechigadzirwa ruzivo, uye ivo vanoda kutaurirana mufekitori yedu. Kuburikidza neratidziro, isu takadzidza nezve izvo zvinodiwa nemusika, padanho rekuvandudza mune imwechete indasitiri, nekukanganisa kwedu. Tichashanda nesimba kuti tivandudze isu mune ramangwana, kugadzira zvimwe zvigadzirwa zvitsva kugutsikana nezvinodiwa mumusika, uye toedza kuvandudza mamiriro ekunze mumunda wezvemotokari.